Garnaqsi Haween | Abdikadir Askar
February 18, 2010 March 2, 2018 / Abdikadir Askar(AA)
Dhanka kale, haweenku waxa ay door lama ilaawaan ah ka ciyaaraan ababinta, kool-koolinta iyo tusmaynta ubadka. Waxa ay jaro-baraan ubadkooda sidii ay u noqon lahaayeen kuwo himilo dheer, oo hilinka toosan qaada, hantana mustaqbalka sugaya. Dumarku waa garabka ninka, siduu isaguba u yahay gaashaankooda. Waxa ay hareeraha la qabataa hawlaha adduunyadda, lanna handaafisaa si hagaagsan ilaa inta u hadhsan. Xisaab ahaan, dumarku waxa ay saamigal qumman la yihiin ragga. Inta ka dhiman raggana ,iyagaa dheellitira. Doorkoogaasi toolmoon, ee taabanayaa dhinac walba oo nolosha ah, ayaa ka dhigay kuwo halhays laga dhigto si qof iyo kooxba, midba sidii uu doonayo ugu muraad qunsado.
“Dheddigaynta” amma afka qalaad sida loo yaqaan “Feminism” waa aragti-falsafadeed, oo salka ku haysa is-barbar bulsheed, oo looga gol leeyahay in sinnaan si walba ah looga dhex abbuuro ragga iyo dumarka. Waa in fal iyo fakar kasta oo la sameeyo, laga eego in ragga iyo dummarku si siman qayb uga yihiin.
Gabadhyahay waxaad xaq u leedahay inaad hanti gaar ah si xalaal ah u kasban kartid, xilligaad doonto korodhsan kartid ammase aad kala daadin kartid, adigoon weliba cidna kala arrinsanayn, amma ahow marwo la qabo amma gashaanti gayaankeed goobaane. Waad shaqaysan kartaa adigoo waafajinaya waxa ay diinteenu ka qabto nooca shaqadu ay tahay. Shaqaddu waa in aanay ahayn mid la xaaraan timeeyey ka shaqaynteeda, tusaale ahaan khamri iibinta iwm. Mid aan ragga iyo dumarku is dhex yaacayn, xad kala soocaana jirin. Waa in gabadhu aynigay doontaba ha ahaatee dhawrtaa hubqaadkeeda dhar xidhasho sida diinteenu ina farayso. Dhaxal waxaad u heshona ee Mawlahu kuu gooyayna adigay kuu gaar tahay, go’aankeedanna adigaa leh.
← Buuggaan Baryahaaba U Bu’ayey
Hoggaaminta Habboon →